दिएको सहयोग पनि लिन नसक्ने ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार दिएको सहयोग पनि लिन नसक्ने ?
दिएको सहयोग पनि लिन नसक्ने ?
अभियान दैनिकको विहीबारको अङ्कमा प्रकाशित नियमित स्तम्भ ‘बहस’ पढ्ने अवसर पाएँ । रेलमार्ग निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा रेल वे विभाग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको विचार पढ्दा निकै नरमाइलो महसूस भयो । विदेशीले गरिदिने विकाससमेत ग्रहण गर्न नसक्नु निकै विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो ।
भारतले २ वर्षभित्र निर्माण गरिदिने भनेको जोगमनी-विराटनगर र जयनगर-बर्दिबास रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले विवादरहित आफ्नो स्वामित्वको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको रहेछ । नेपाल सरकार आफैले रेलमार्ग निर्माण गर्नु त परको कुरा उसले मुआब्जावापतको ८० करोड रुपैयाँसमेत उपलब्ध गराउन सकेको रहेनछ ।
उक्त दुई मार्गसहित सीमा नाकामा पाँचओटा रेलमार्ग निर्माण गरिदिने भनेर भारतले गरेको सम्झौतामा उसका पनि स्वार्थहरू अवश्य नै लुकेका छन् । नेपालमा आफ्नो बजार विस्तार गर्ने उसको स्वार्थ हुन सक्छ । किनभने नूनदेखि सुनसम्मका सामग्रीका लागि नेपालले कुनै नै कुनै हिसाबले भारतमै निर्भर रहनुपरेको छ । यी मार्गहरू निर्माण हुन सके भारतले मात्रै होइन, नेपालले पनि वाणिज्य लाभ लिन सक्छ । पेट्रोलियम पदार्थलगायत अन्य समाग्री आयातका लागि पनि यी मार्गहरू उपयुक्त सावित हुन सक्छन् । त्यस्तै, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा परेको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग (९ सय ४५ किमि) निर्माणका लागि आधारहरू खडा हुन सक्छन् ।
नाकाका यी मार्गहरूलाई पूर्वपश्चिम रेलमार्गसँग जोडेर रेलमार्गको आन्तरिक सञ्जालसमेत निर्माण गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, यी सबै सम्भावना बोकेको रेलमार्ग निर्माणको कामलाई एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै पछाडि पारिने काम भएको रहेछ ।
विकास निर्माणका कामका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, आयोग वा सम्पूर्ण निकायले एक अर्कासँग हातेमालो गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुनुको साटो एकअर्काबीचमा दोषारोपणको शृङ्खला पो चुलिँदै गएको रहेछ । यस्ता सबै प्रवृत्तिलाई हेर्दा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको नेपालको कर्मचारीतन्त्र निकै निकम्मा बन्दै गएको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न छोडेर पत्रपत्रिका तथा सञ्चारमाध्यममा दोषारोपण, विवाद र बहस गर्दै हिँड्नु कुनै पनि अर्थमा राम्रो छैन । बरु उनीहरूले आफूले गरेको विकास निर्माणको कार्यलाई सञ्चारमाध्यममा ल्याउन सक्नुपर्ने हो । त्यसैले, नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नयनकुमारी कटुवाल, ओखलढुङ्गा
रेल विभाग पनि रहेछ
नेपालमा रेल विभाग पनि छ भन्ने कुराको हालसम्म मलाई जानकारी नै थिएन । यस पत्रिकामा यसका विषयमा पढेपछि जिज्ञासा बढयो र खोजी गर्दा थाहा पाइयो । यो विभाग स्थापना भएको करीब २ महीना मात्रै हुन लागेको रहेछ ।
तर, विभाग मात्रै गठन भएर केही पनि हुँदैन । यो विभागले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने देशभित्रै अत्याधुनिक रेल देख्ने नेपाली जनताको सपना पूरा होला । होइन भने रेलविनाको विभाग हुने देखिन्छ । नेपालका सरकारी निकायहरूले आफूलाई महत्त्वपूर्ण र ठूलो ठान्ने र अन्य निकायलाई साना देख्ने प्रवृत्तिका कारण पनि समयमा सही योजना र कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ । विभागले देशमा रेलसेवाको विकासका लागि सही योजनाका साथ काम गरोस् ।
देश भनेको एउटा मानव शरीर जस्तै हो, जसका सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गले आआफ्नो ठाउँमा सही भूमिका निर्वाह गरे मात्र देश विकसित हुँदै जान्छ । त्यसैले, सबै निकायको भूमिका आआफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नु जरुरी देखिएको छ । यसो हुने हो भने देशको विकास पनि रेलकै गतिमा हुने थियो । होइन, भने यो देश बिग्रिएको ट्रयाक्टरको हालतमै रहिरहनेछ । रेल विभागको कामले राम्रो शुभारम्भ र निरन्तरता पाओस् ।
विवेक विष्ट, टेकु, काठमाडौं